6အလွှာ 0.8mm Flex ကိုတင်းကျပ် immersive ရွှေ 2U "Printed Circuit ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်သူများ - တရုတ် 6layer 0.8mm Flex ကိုတင်းကျပ် immersive ရွှေ 2U "Printed Circuit ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်သူများပေးသွင်းသူ,စက်ရုံ -WMD
6အလွှာ 0.8mm Flex ကိုတင်းကျပ် immersive ရွှေ 2U "Printed Circuit ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်သူများ
6 အလွှာ Flex ကို- တင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့
125*340မီလီမီတာ / 1pcs
6အလွှာ Flex ကို - တောင့်တင်းသော
6 အလွှာ PCB, ပစ္စည်း FR4 PI ဖြစ်ပါတယ်, အထူကြေးနီ 1oz ဖြစ်ပါတယ် 0.8mm ပြီးဆုံးဖြစ်ပါသည်, မျက်နှာပြင်ကုသမှု "immersive ရွှေ 2u ဖြစ်ပါသည်, အစိမ်းရောင် soldermask နှင့် coverlay. အဆိုပါလိုင်း width နဲ့အာကာသကျဉ်းမြောင်းဖြစ်ပါသည်.
တင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့ PCB, စံ PCB FR4 TG1352LF HASL ရှေ့ပြေးပုံစံ PCB 1oz အလွှာ PCB.
တင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့ PCB, မြင့်မားသော TG PCB2အလွှာ ENIG 1oz FR4 TG170 အလတ်စား volumn PCB.
မြင့်မားသော TG PCB2အလွှာထူထပ်သောကြေးနီ PCB FR4 TG170 3oz ကြေးနီ PCB 2.4mm LF HASL PCB.